Victoria အမှုကူညီပေးနေသူ သက္ကမိုးညိုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ သိက္ခာကျဆင်းစေရန် Facebook ပေါ်တွင်ရေးသားဖော်ပြမှုဖြင့် ဖမ်းဆီး...! - Myanmar Daily Time
[ July 18, 2019 ] အရမ်းတော့ ချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်ရေးမှာ ဘယ်တုန်းကမှ ကံမကောင်းဘူး ဆိုတာ ဒီလိုအချက်တွေ ကြောင့်ပါ	RELATIONSHIP
[ July 18, 2019 ] အခုတလော လူပြောများနေတဲ့ မာစတာရှပ်ဖ်ရဲ့ ဒိုင်လူကြီး ဦးရဲထွဋ်ဝင်း အကြောင်း	LIFESTYLE
HomeNEWSVictoria အမှုကူညီပေးနေသူ သက္ကမိုးညိုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ သိက္ခာကျဆင်းစေရန် Facebook ပေါ်တွင်ရေးသားဖော်ပြမှုဖြင့် ဖမ်းဆီး…!
ရဲတပ်ဖွဲ့ သိက္ခာကျဆင်းစေရန် Facebook ပေါ်တွင်ရေးသားဖော်ပြမှုများနှင့် ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးမြင့်နိုင်က တရားလိုပြုလုပ်ကာ အီလက်ထရောနစ်ပုဒ်မ ၃၄ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်လိုက်၍ သက္ကမိုးညိုအကောင့်ပိုင်ရှင် ကိုဝင်းကိုကိုသိန်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းပုဒ်မမှာ အာမခံပေး၍ မရကြောင်း၊ အပြစ်ရှိပါက ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အပြင် ငွေဒဏ်ကျပ် သိန်း ၅၀ အထိလည်း ချနိုင်ကြောင်း ပျဉ်းမနားရဲစခန်း ထံမှသိရသည်။
သက္ကမိုးညိုကို နေပြည်တော်၊ အမှတ် (၁) ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှနေ၍ ပျဉ်းမနားရဲစခန်း သို့လွှဲပြောင်း ဖမ်းဆီးထားအကြောင်းလည်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Myanmar Now က ကနဦးရရှိထားသော Wisdom Hill ကျောင်းက ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်သည် ဆိုသည့် သတင်းမှာ မှားယွင်းပြီး သက္ကမိုးညိုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကသာ အမှုဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ပျဉ်းမနားရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းထံမှ သိရသည်။
(ကနဦး ရရှိထားသော သတင်း) ၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရ၍ သက္ကမိုးညိုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ခေါ်ယူစစ်ဆေး
နေပြည်တော် Wisdom Hill ကျောင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုမှ ကျူးလွန်ခံရသူ အသက် ၃ နှစ်အရွယ် မူကြိုကျောင်းသူ ကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယား အရေးကို အဆက်မပြတ် ရေးသားဖော်ပြပေးနေသည့် သက္ကမိုးညို အကောင့်ပိုင်ရှင် ကိုဝင်းကိုကိုသိန်းကို Wisdom Hill ကျောင်းက ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်လိုက်၍ နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အမှတ် ၁ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက ယနေ့နံနက်တွင် ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းရရှိထားသည်။
မနေ့ညကလည်း နေပြည်တော်ရှိ သက္ကမိုးညိုနေထိုင်ရာ တိုက်ခန်းသို့ မသင်္ကာဖွယ်အရပ်ဝတ် ၂ ဦးလာရောက်ခဲ့ကြောင်းလည်း သူ၏အကောင့်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) မှာ အာမခံပေးရမည့် ပုဒ်မလည်းဖြစ်သည်။အသေးစိတ်ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။
ရဲတပျဖှဲ့ သိက်ခာကဆြငျးစရေနျ Facebook ပျေါတှငျရေးသားဖျောပွမှုမြားနှငျ့ ပဉျြးမနားမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးမွငျ့နိုငျက တရားလိုပွုလုပျကာ အီလကျထရောနဈပုဒျမ ၃၄ (ဃ) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့လိုကျ၍ သက်ကမိုးညိုအကောငျ့ပိုငျရှငျ ကိုဝငျးကိုကိုသိနျးကို ယနနေံ့နကျပိုငျးက ဖမျးဆီးလိုကျခွငျးဖွဈပွီး ယငျးပုဒျမမှာ အာမခံပေး၍ မရကွောငျး၊ အပွဈရှိပါက ထောငျဒဏျ တဈနှဈမှ သုံးနှဈအပွငျ ငှဒေဏျကပျြ သိနျး ၅၀ အထိလညျး ခနြိုငျကွောငျး ပဉျြးမနားရဲစခနျး ထံမှသိရသညျ။
သက်ကမိုးညိုကို နပွေညျတျော၊ အမှတျ (၁) ရဲတပျဖှဲ့စခနျးမှနေ၍ ပဉျြးမနားရဲစခနျး သို့လှဲပွောငျး ဖမျးဆီးထားအကွောငျးလညျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။
Myanmar Now က ကနဦးရရှိထားသော Wisdom Hill ကြောငျးက ဆကျသှယျရေးဥပဒပေုဒျမ ၆၆ (ဃ) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့သညျ ဆိုသညျ့ သတငျးမှာ မှားယှငျးပွီး သက်ကမိုးညိုကို ရဲတပျဖှဲ့ကသာ အမှုဖှငျ့ထားခွငျးဖွဈကွောငျးလညျး ပဉျြးမနားရဲတပျဖှဲ့ စခနျးထံမှ သိရသညျ။
(ကနဦး ရရှိထားသော သတငျး) ၆၆ (ဃ) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ခံရ၍ သက်ကမိုးညိုကို ရဲတပျဖှဲ့ ချေါယူစဈဆေး
နပွေညျတျော Wisdom Hill ကြောငျးတှငျဖွဈပှားခဲ့သော သကျငယျမုဒိမျးမှုမှ ကြူးလှနျခံရသူ အသကျ ၃ နှဈအရှယျ မူကွိုကြောငျးသူ ကလေးငယျ ဗဈတိုးရီးယား အရေးကို အဆကျမပွတျ ရေးသားဖျောပွပေးနသေညျ့ သက်ကမိုးညို အကောငျ့ပိုငျရှငျ ကိုဝငျးကိုကိုသိနျးကို Wisdom Hill ကြောငျးက ဆကျသှယျရေးဥပဒပေုဒျမ ၆၆ (ဃ) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့လိုကျ၍ နပွေညျတျော၊ ဇမ်ဗူသီရိမွို့နယျ အမှတျ ၁ ရဲတပျဖှဲ့စခနျးက ယနနေံ့နကျတှငျ ချေါယူစဈဆေးနကွေောငျး သတငျးရရှိထားသညျ။
မနညေ့ကလညျး နပွေညျတျောရှိ သက်ကမိုးညိုနထေိုငျရာ တိုကျခနျးသို့ မသင်ျကာဖှယျအရပျဝတျ ၂ ဦးလာရောကျခဲ့ကွောငျးလညျး သူ၏အကောငျ့တှငျ ဖျောပွထားသညျ။ ဆကျသှယျရေးဥပဒပေုဒျမ ၆၆ (ဃ) မှာ အာမခံပေးရမညျ့ ပုဒျမလညျးဖွဈသညျ။အသေးစိတျကို ဆကျလကျဖျောပွပါမညျ။
This Month : 25538
This Year : 165858
Total Users : 191743
Total views : 580012